नेप्सेले अनुमोदन गर्यो आइटी पोलिसी, के हुँदैछ एपीआई ? - Mero Mechinagar
नेप्सेले अनुमोदन गर्यो आइटी पोलिसी, के हुँदैछ एपीआई ?
भित्र अर्थ / वाणिज्य
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) ले आइटी पोलिसी अनुमोदन गरेको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको केही दिन अघि बसेको बैठकले आइटी पोलिसी पारित गरेको हो । यस पोलिसीले अनलाइन लगायत सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । तथापि, आइटी पोलिसी भित्र पर्ने एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) नीति भने अनुमोदन भएको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइटी पोलिसी अन्तर्गत राखेको एपीआईलाई बेग्लै पोलिसी बनाउन निर्देशन दिएकाले एपीआई नीतिले अन्तिम रुप लिन बाँकी भएको नेप्से स्रोतले बताएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले तयार पारेको मस्यौदामा सुधार गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार नेप्सेले सुधार गरेर आइटी पोलिसी पास गरेको हो । नेप्से सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेपछि अब यस आइटी पोलिसीलाई धितोपत्र बोर्डले पारित गरिरहनु नपर्ने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । योसँगै आइटी पोलिसी अबको केही समयमा नै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने भएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आइटी पोलिसी कार्यान्वयमा आएपछि यसले पूर्ण अनलाइन कारोबारलाई सहज तथा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरोकारवाला निकायको रहेको छ ।
कहिले होला एपीआई पोलिसी अनुमोदन ?
एपीआई पोलिसीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यसमा अन्तिम छलफल भइरहेको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले नेपाली पैसालाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले एपीआई पोलिसीको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं । यसमा अब अन्तिम छलफल हुँदैछ ।’ अबको केही दिनमै पोलिसी पारित गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेप्से सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेसँगै एपीआई पोलिसी कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । एपीआई पोलिसी कार्यान्वयनमा आएपछि ब्रोकर कम्पनी र स्टक डिलरलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ ।
नेप्सेले निश्चित रकम लिएर ब्रोकर लगायत आवश्यक पर्ने अन्य संस्थाहरुलाई समेत एपीआई दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेप्सेले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । त्यसैको आधारमा एपीआई उपलब्ध गराउने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । यता, एपीआई पोलिसी आएसँगै ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो बेग्लै टीएमएस बनाउन सक्नेछन् । फलस्वरुपः अहिले लगानीकर्ताले खेप्नुपरेका अनलाइन कारोबार सम्बन्धी कतिपय समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले नेप्सेको टीएमएसमा बेलाबेलामा लग इन नहुने, खरिद बिक्री आदेश नदेखिने जस्ता करणले लगानीकर्ताले हैरानी खेप्नुपरेको ब्रोकरहरुले दाबी गरेका छन् । एपीआई नीति आएपछि आफ्नो अलग्लै टीएमएस ल्याउन ब्रोकरहरु तयार रहेको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका आध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए । उनले भने, ‘नेप्सेले ब्रोकरहरुलाई एपीआई तथा यससम्बन्धी आवश्यक नीतिनियम बनाइदिएमा अलग्गै टीएमएस बनाउन आफूहरु तयार रहेको पनि उनले बताए ।’
नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा
आज रोपाइँ गरेर देशभर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै
सिप सिकेर दक्ष बन्ने हो भने, कोहि पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैनः नगर प्रमुख बुढाथोकी
सुरु भयो मोफसलमा जहाजहरूको रात्रि बिसान
एघार महिनामा करिव चारलाख रुपैयाँको माछा आयात
इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थल बन्द
भरतपोखरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बन्ने